ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ် 2015 – စတိုးဆိုင်၌အဘယ်အရာကိုဖွင်?
ဇန္နဝါရီလ 1, 2015 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုလာမည့်နှစ်တွင်စီစဉ်ထားကြသည်ဘယ်လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် writeup စေချင်တာတွေ:
backend string ကိုအယ်ဒီတာ – ဒီ feature အကြောင်း 80% ယခုအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော, ဒါကြောင့်သင့်ကိုဒေတာဘေ့စမှဖြည့်စွက်ကြိုးမြင်ရပြီးအဲဒီအပေါ်အချို့သောလုပ်ရပ်တွေလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြု. ယခုထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းဘာသာပြန်တဲ့မှအားလုံးဘာသာပြန်ချက်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအဖြစ်အလွန်ခက်ခဲသောအရာတို့ကိုတစ်ဒင်္ဂဖြစ်ရလိမ့်မည်. ဒီ feature ကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းလွှတ်ပေးရန်မျှော်လင့်နေသည်.
အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ directory ထဲတွင်ရှိဝစ်ဂျက်အတွက်ပံ့ပိုး – ထုံးစံ widget ကစာရေးဆရာများ စောဒကပါပြီ (နှင့်မှန်ကန်စွာဒါ) အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအရှိဝစ်ဂျက်တစ်ခု Reinstall အားဖိအားပေးနေခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်း. အဆိုပါအခြေခံအယူအဆတချို့ဖိုင်တွေနေခွင့်ပြုပါရန်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်ရတဲ့များကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်. ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ကို plugin ကိုဖိုင်အရွယ်အစား inflating မပါဘဲရှိဝစ်ဂျက်များပိုမိုရွေးချယ်စရာပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသော download လုပ်လို့ရ widget က directory ၏ထို option ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်စေခြင်းငှါ,.
Frontend string ကိုအယ်ဒီတာ – ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြိုးတချို့ interface ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်, ကနေစဉ်တွင်မ “WYSIWYG” အချို့သောပိုကောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, အဓိကအားဖြင့် meta ညှို့ကိုတည်းဖြတ်ရန်လေးစားစွာဖြင့်နှင့်အခြားက hidden ကြိုးနှင့်အတူ, အချို့ကံဇာတာနှင့်အတူ, Ajax ဘာသာပြန်ချက်များကိုသည်လည်းဤအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် Edit ဖြစ်လိမ့်မည်. ဒီတလာရန်လအနည်းငယ်ယူပါလိမ့်မယ်.
Numeral system ကိုထောက်ခံပံ့ပိုး – ဒီ feature ကိုအလိုအလျောက်အာရဟိန္ဒူစနစ်များဥရောပဂဏန်း system ကနေနံပါတ်များ translate လိမ့်မယ် (လို့ဒုအမတ်များက). မစိုးရိမ်ရသည့် feature ကိုသင်မူကား, နီးတဲ့ parser ကိုမကြာမီလာကောင်းမွန်တဲ့ feature.
WP Menu ကိုပေါင်းစည်းမှု – တကယ်တော့ဤသို့ပြုအပေါ်အရမ်းစိတ်အားထက်သန်မ, ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ,, မလာနိုင်တဲ့.
မည်သည့်ထင်မြင်ချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များအောက်တွင်ကြိုဆိုကြလိမ့်မည်, သူတို့သဘောဖြစ်စေလျှင်ငါတို့သည်ငါတို့၏ workplan သူတို့ add ပါလိမ့်မယ်. သင်အမှန်တကယ် feature တစ်ခုမြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရှိဆိုရင် coding စပွန်ဆာနိုင်ပါသည်, ပုံစံကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
version 0.9.5 – ပျောက်အဆင့်မြှင့်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2014 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 8 comments
version 0.9.5 ရှည်လွန်းလွန်ခဲ့တဲ့ပြန်လွှတ်မပေးခဲ့ဘဲ, နှင့်အပြည့်အဝဗားရှင်း 0.9.5.1 အဖြစ်ကောင်းစွာပြန်လွတ်လာခဲ့သည်. သင်သည်ကိုယ်ကိုမေးပါလိမ့်မည်, ငါသည်ငါ၏ wordpress ကို dashboard အတွက် updates တွေကိုရှာဖွေနေပါ၏နဲ့ကျွန်မဘာမှမမြင်မမှတ်ကြ, ဘယ်လိုလာ?
ဤသည်ကိုအတိအကျအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် 0.9.5 ဘဝဆီသို့ရောက် လာ. ,, wordpress ကိုအားဖြင့်အဆင့်မြှင့် API ဖန်ဆင်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးပါသည့် bug ကိုရှိ၏ 3.8 အားလုံး updates တွေကိုပိတ်ဆို့ transposh ဖန်ဆင်းသော (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင်) ထို dashboard မှ.
နောက်ဆုံးပေါ်အပြည့်အဝဗားရှင်းမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်, အနည်းငယ် options များရှိပါသည်:
လက်ရှိ Transposh plugin တွေကို disable, updates တွေကိုစစ်ဆေးဖို့, ဗားရှင်း update လုပ်ဖို့ 0.9.5 wordpress.org ကနေ, plugin ကိုသက်ဝင်စေ, အမှတ် “အပြည့်အဝဗားရှင်း update လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု” နောက်တဖန်ကို update
plugin ကိုသင့်ရဲ့လက်ရှိ version ကိုပယ်ဖျက်ပြီး wordpress.org ကနေ version ကို install လုပ်ပါနဲ့ update ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာ
ကို manually နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို download ရုံကသင့်ရဲ့ server ပေါ်ရှိဖိုင်များကိုအစားထိုးဖို့.
ပိုပြီးဘာသာစကားများကို Google အင်ဂျင်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်, ရန်အရေအတွက်စုစုပေါင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ 82 ထောက်ခံဘာသာစကားများ!
ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဗားရှင်းခဲ့သည်, ကို Google proxy ကိုထောက်ခံမှုဖြင့် fixed ကိစ္စများ, ငါတို့သည်လည်းယင်းနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝပို့စ်ရေးသင့်, ဒါကြောင့် 0.9.4, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းပန် accept ကျေးဇူးပြုပြီး😉
ဗားရှင်းအသစ်ကိုခံစားပျော်မွေ့, မည်သည့်အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူး
version 0.9.3 – ငါ့အလံဘယ်မှာသွားခဲ့ပါ?
မေ 10, 2013 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 40 comments
့အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို အသုံးပြု. အပြည့်အဝဗားရှင်းမြှင့်တင်:
wordpress.org ကနေနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမြှင့်တင် (သောကနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်, ဟိုမှာ)
စစ်ဆေးခြင်း “အပြည့်အဝဗားရှင်းမြှင့်တင်ခွင့်ပြု” ထို setting ထဲတွင်
Update ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site မှအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
တချို့က bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
အစဉ်အမြဲအသုံးမဝင်ဖြစ်ဘူးသော REL = alternate ကိုဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း
(0.9.3.1) ကျနော်တို့က Google ကထောက်ပံ့အသစ်ဘာသာစကားများထည့်သွင်းဖို့က sub version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစုပေါင်း count ကိုအောင် – 73! (ဒီနေရာမှာမည်သူမဆိုမုံဟောပြောသောသူရှိလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ)
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: အပြည့်အဝဗားရှင်း, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, ဗီဒီယို, wordpress.org